ဂေဇတ်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်-A Guide to Using Gazette | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ဂေဇတ်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်-A Guide to Using Gazette
ဂေဇတ်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်-A Guide to Using Gazette
Posted by ဂျစ်စူ on Aug 31, 2011 in How To.., Myanmar Gazette | 110 comments
ဤဆိုဒ်ထဲတွင် ပို့ စ် တင်၊ ကွန့်မန့် ရေးဖို့ အတွက် အရင်ဆုံး ရွာသူား အဖြစ်
ထို့ ကြောင့် Register အရင်လုပ်လိုက်ပါ။
လင့်ခ်ကို နှိပ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ညာဘက် Side Bar က Register ဆိုတဲ့လင့်ခ်ကို
Username,Email,password စသဖြင့် ကိုယ်ရေး အချက်လက်ဖြည့်တဲ့ နေရာရောက်ပါမယ်။
– နာမည်ကြိုက်သလိုပေး၊ အီးမေးလ် မှန်အောင်ထည့်(Password မေ့ရင် Email မှတဆင့် ပြန်ယူလို့ရအောင်).
Password, First name, Last name, City အဆင်ပြေသလိုဖြည့်ပါ။
CJ အကွက်နေမရာမှာ ဖြည့်စရာမလိုပါ။
CAPTCHA အကွက်မှာ မြင်တဲ့စာသား ဂဏန်းအတိုင်း မှန်အောင်ဖြည့်ပါ။
ပြီးရင် Register ကိုနှိပ်ပါ။
-Registration complete ပေါ်လာရင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးပြီမို့ 
ခုဏကဖြည့်ခဲ့တဲ့ username and password ဖြည့်ပြီး Log in လုပ်၍ ရွာသူ၊သား အဖြစ်
စာရေးခြင်း၊ကွန့် မန့်ပေးခြင်းအလုပ်များ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
-Log In ၀င်ရန်
ဒါလေးများဆိုပြီး..မရယ်ပါနဲ့ နော့…ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိအောင် ဖော်ပြပေးတာပါ။
http://myanmargazette.net/ ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ညာဘက် ဘားမှာ In & Out အောက်မှာ Log In ရှိ ပါတယ်
ဒါမှ မဟုတ်.ပို့ စ်တစ်ခုဖတ်ရင်းနဲ့ လဲ ၀င်လို့ ရပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်.ဒီအောက်ကလင့်ခ် မှတိုက်ရိုက် ၀င်နိုင်ပါတယ်။
မိမိအကောင့်ရဲ့ Dashboard – http://myanmargazette.net/wp-admin/ သို့ ဝင်တာနဲ့ လဲ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။
-Dashboard မှာ ဘာလုပ်လို့ ရသလဲ
All Posts ဆိုတာ မိမိတင်ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့ စ်တွေ ပြန်ကြည့်ဖို့ ပါ
Add New ဆိုတာ ပို့ အသစ် တင်ဖို့ ပါ
Library ကတော့ ရွာသူ/သားတွေ တင်ထားတဲ့ ပုံတို့ ဘာတို့ ရှိတဲ့ နေရာပါ
Add New ကတော့ ကိုတင်ထားချင်တဲ့ ဖိုင်၊ဓာတ်ပုံ စသည် တင်လို့ ရပါတယ်
Comments ကတော့ ရွာသူ/သားတွေ နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်တွေ အကုန် ကြည့်ဖို့ ပါ
သင့်ရဲ့ Nick name,Contact Info ,About Yourself ,Avatar တို့ ကို ပြင်ရန်ဖြစ်ပြီး Password တွေဘာတွေပြောင်းချင်လဲ အဲဒီကိုသွားပြီးပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ Update Profile ပေါ့.။
CubePoints ကတော့ သင် Log in ၀င်လို့ ၊စာရေးလို့ ၊ကွန်းမန့် ပေးလို့ ရထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
– ပို့ စ်တစ်ခု အသစ်တင်ရန်
Dashboard သို့ ရောက်ပြီးသားဆိုရင် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Add new မှတစ်ဆင့် တင်နိုင်သလို
အပေါ်ဘားတန်း(Admin Bar)ရှိ Add new>Post မှတစ်ဆင့်လဲ တင်နိုင်ပါတယ်
ဒီလင့်ခ့် http://myanmargazette.net/wp-admin/post-new.php ကိုနှိပ်၍လဲ တိုက်ရိုက် တင်နိုင်ပါတယ်။
တင်တဲ့အခါ Visual နဲ့HTML နှစ်ခုရှိရာမှာ အလွယ်ဆုံးကတော့ Visual ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး စာရေးတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
HTML နဲ့ တင်ရင်တော့ ကုဒ်တွေနဲ့ ဖြစ်ပြီး စာအရှိအတိုင်း မပြလို့ရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
– ဓာတ်ပုံ Upload တင်ရန်
ဓာတ်ပုံတင်တာကတော့ အောက်မှာဝိုင်းပြထားတဲ့ ပုံလေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်
ကွန်ပျူတာထဲကပုံ၊ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ပုံ URL.၊ သို့ မဟုတ် Media Library ဆိုပြီးရှိရာမှာ
ပြီးလျင် သင့်တော်ရာ ခေါင်းစဉ်တပ်၊ရေးချင်ရာရေး ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အောက်နားမှာလဲ မိမိရေးတဲ့စာနဲ့သင့်တော်ရာ Category ကိုရွေး၊မှတ်မိလွယ်မဲ့ Tag ထည့်
သေချာအောင် အားလုံးပြန်စစ်၊အိုကေ.ပြီးပြီဆိုလျင်တော့ ညာဘက်နားမှာရှိတဲ့ Public ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါတော့။
ဒါဆိုလျင်တော “ဖွတ်”ကနဲဆို့သင့်ရဲ့ လက်ရာ ဂေဇတ်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
၁) ပို့စ်အောက်ဆုံးနားမှာ Related posts: ဆိုတာရှိပြီး..အဲဒီကနေ တင်ထားတဲ့ပို့စ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
၂) အပေါ်ခေါင်းစဉ်( Title)အောက်ကပ်ရက်မှာ.. Posted by xxxxx on Aug 23, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, History | xx comments ရှိပြီး အဲဒီက.. Category > Aung San/Aung San Suu Kyi ကို ကလစ်လုပ်၊ ဆိုင်တဲ့ Category အောက်ကစာတွေရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
ဒီအောက်ကပုံထဲကလို့Button လေးတွေကလစ်ထောက်ပြီး ကြည့်ချင်တဲ့ Click လိုက်ယုံပါပဲ။
၃) စာရေးသူအကြောင်း (About xxxxxx) အောက်နားလေးမှာ View all posts by xxxxxxx →ဆိုတာကို ကလစ်လုပ်ပြီး အဲဒီစာရေးသူတဦးထဲက ရေးခဲ့တဲ့..စာတွေအကုန် တစ်စုတစ်ဝေးထဲပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
၄) အပေါ်ညာဖက်ထောင့်က (Search )မှာမှတ်မိသလောက်. ခေါင်းစဉ်စာသားကို ရိုက်ထည့်ပြီး တက်လာတဲ့ပိုစ့်တွေထဲကရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်.. (Credit @ သဂျီး)
– Comment ရေးခြင်း
ကွန်းမန့် ရေးရာမှာ ပုံထည့်ရေးလို့ မရပါ..သဂျီးက စာလုံးချည်ပဲ ရေးခွင့်ပြုထားပါတယ်။
အထူ = < strong >အထူ< /strong >
အစောင်း = < em >အစောင်း< /em >
ဖျက်တာ= < del datetime=”2011-08-26T10:14:08+00:00″ >ဖျက်တာ< /del >>
< strong >အထူ< /strong > နောက်က စပေ့ ထားတာကို ဖျက်လိုက်ပါ..။ ကုဒ်ပေါ်အောင် စပေ့ထားပေးထားတာပါ..။(Credit @ သဂျီး)
ကွန်းမန့် တွေဘေးက + အနီတွေ၊+အပြာတွေကတော့ အောက်မှာဝိုင်းပြထားတဲ့ ဘဲဥပုံ
ကို မောက်စ် ကာဆာနဲ့ ထောက်လိုက်ရင် Was this answer helpful? ဖိုပြီး Box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
+ နဲ့– ရှိရာမှာ အကျိုးရှိမယ်ထင်တဲ့စာဖြစ်နေရင် + ကိုနှိပ်နိုင်ပြီး
လျှောက်ရွှီးထားတဲ့ ကွန်းမန့် ဆိုရင်တော့ – ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိုရမ်ကိုသွားဖို့ အတွက် ဆိုဒ် ညာဘက် အပေါ်ဆုံးမှာစာလုံးအဖြူအကြီးနဲ့Forum ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်
ဖိုရမ်မှာတင်တဲ့ပို့ စ်တွေကို ညာဘက် ဆိုဒ်ဘားရှိ Recent Forum Posts အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
တောင်းပန်စာ၊ ကျေးဇူးတင်လွှာ ကြော်ငြာများ၊ထွေရာလေးပါး၊ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ကော်ပီများကိုတော့
ဖိုရမ်မှာ အနီးစပ်ဆုံး Category ကို ရွေးပြီး ရေးနိုင်ပါတယ်။
Comment တွင် Smiley Icon ထည့်သွင်းခြင်း
အောက်ပါ ပုံတွင် ကြည့်ပါ
* Link နှင့် အိုင်ကွန်အသုံးပြုနည်း အနည်းငယ် ပြင်ထားပါတယ် သဂျီးရေ။ *
ဟုမ်းပေ့ခ်ျပေါ်ကHow To WriteaPost ဆိုတာဂျီးတော့မြင်ကြမှာပါ နော..
စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) says:
အတော်ပဲ ဒါလေး ကော်ပီကူးပြီ
ခဏ ခဏ ဖတ်ရမယ်
တင်ပေးတဲ့ နောင်တော်ကြီးတွေကို ကျေးဇူးပဲဗျာ
ဆိုဒ်လမ်းညွှန်ဆိုတာ တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်
ရွာသူ ရွာသားအသစ်တွေ အတွက် သိပ် ကို အဆင်ပြေစေမျာပါ ။
ကျွန်တော် လည်း..မရှင်း မရှင်းဖြစ်နေတာလေးတွေ..ရှင်းသွားပါတယ် ။
တင်ပြီးသား ပို့စ်ကို edit လုပ်နည်းပြောပြအုန်းအေ့
April Star says:
Points tway ka bar lope ya mhar lal?
Ko Hla Myo Swe says:
ကျေးဇူးပါပဲ ကို kai ရေ။
Post အသစ်တင်ရင် Tag က ဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲ ဆိုတာလေး သိချင်လိုပါဗျာ။
အရမ်းအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တယောက်ထဲ လိုက်လုပ်ကြည့်နေပေမယ့်ပို့စ်ကမတက်လာပါဘူး ဒီစာလေးဖတ်လိုက်လိုက်လုပ်တာအဆင်ပြေလို့ ပို့စ်တခုတင်လိုက်နိုင်ပါတယ် တကယ်ကိုကျေးဇူးပါ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ် သေချာအသေချာလေးရေးပေးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဖောင့်ဆိုတာ အူးလေး ကွန်ပျူတာထဲမှာ သွင်းထားတဲ့ ဖောင့်နဲ့ ပဲ ရိုက်လို့ ရမယ်ဗျ
ဘယ် Browser နဲ့သုံးတာလဲ
အကောင်းဆုံးကတော့ မော်ဇီလာနဲ့ သုံးတာကောင်းပါတယ်
Tool>Option>Content>Default Font ကို ZawGyi-one ပြောင်းထားရဲ့လား
ပြီးတော့ Default Font ဘေးက Advanced ထဲဝင်ပြီး ကျန်တဲ့ဟာတွေကော ဇော်ဂျီဖြစ်လားဗျ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ တကယ်ပါ။ ကျွန်တော်က သည်မှာ ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ သူကြီးလှမ်းမေးမလို့လုပ်နေတာ။ ခုတော့ ဦးစိန်ဗိုက်ကောင်းမှုကြောင့် သိချင်တာတွေ သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူး ကဍေကဍာပါခင်ဗျာ။
အခုလိုပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နို့မို့ဆိုဆိုဒ်ထဲမှာ ယောင်လည်ယောင်လည်
ဖြစ်နေလို့ပါ။ အခုမှ အသစ်ဝင်ကာစဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းတို့အတွက်တော့ တော်တော်ကို အဆင်ပြေစေတာပါ။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါနော်…………
ဦးဗိုက်ရေ…… ကယ်ပါဦး။ သမီး ပို့စ်အသစ်တစ်ခုရေးတာ category မရွေးလိုက်မိဘူး။ အဲဒါ copy/paste ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလေးပါ။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။ ကူညီပါဦး။
Thek Ka says:
တင်ပြီးသားပို့စ်ကို edit လုပ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ပြောပြပေးပါနော်။
၀င်ကာစရွာသား အတော်များများ ပြင်ခွင့်မရှိသေးပါဘူးဗျား..
ဟုတ် ဒါဆို တော်တော်ကြာမှ ပြန်လာမေးပါ့မယ်
foe zaw says:
တော်တော်တော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတော်ရေ ဒီလိုတင်ပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါပဲနော် တင်မယ် ဖတ်မယ် မှတ်မယ် မျှဝေမယ်ဟေ့…………………………
ဦးဗိုက်ရေ သေသေချာချာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တင်ပေးထာလို့ ကျေးဇူးအများကြိံးတင်ပါတယ်နော် တိုးလေးက ရွာထဲရောက်ခါစဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်ဖြစ်နေတာဒိံပိုစ့်လေး ဖတ်ပြိံးမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ဒါပေမယ့် ပုံတွေ အများကြိံးတင်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲပြောပြပေး ပါဦးနော် ???
post တင်တဲ့အခါကျရင် အဆင်ပြေတဲ့အတွက် ကျေးဇူး
ကလောင် နာမည်နဲ့ search လုပ်ရင်ရော မရဘူးလား ဆြာဗိုက်ရယ်။ ဂယ်မသိလို့ပါ။
ကျနော် ဒီစာရွက်ကိုလိုက်ရှာနေတာ သုံးလလောက်ရှိနေပြီဒီနေ့မှပဲတွေ့ရတော့တယ်ဗျာ
လေးနှစ်လောက် ကွဲးနေတဲ့ ရည်းစားနဲ့ပြန်တွေ့တာတောင် ဒီလောက်မပျော်ဘူး
athwe lay says:
လက်စနဲ့ကိုဗိုက်ရေ TAG ဆိုတာလေးရှင်းပြပြီးထည့်နည်းလေးပါနမူနာပြပေးပါနော်။
ပို့ စ်တင်တဲ့အခါ Category တွေရဲ့အောက် Post tag ဆိုပြီး စာရေးတဲ့ အကွက်လေး ရှိတယ်
အဲထဲမှာ တစ်ခုခု ရေးပြီး Add ကို နှိပ်လိုက်ရင် Tag ဖြစ်ပြီ
ပို့ စ်နဲ့အဆက်စပ်ဆုံး စာသားကို ဖြည့်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်
Tag တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ဆိုရင် ဆိုဒ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးက လင့်ခ်တွေကို နှိပ်ကြည့်ပါ
tag ဆိုတာ အဲသလို ဖြစ်ပါတယ်
nay khin says:
ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရေးသားဖော်ပြထားလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
့all rite! thanks. i try it. :hee:
လူသစ်တယောက် ရွာထဲ ၀င်ချင်ရင် ဘယ်ကစရမလည်း ဆိုတာလေးလည်း
Member ၀င်လို့တောင်မရ ဖြစ်နေလို့တဲ့ခင်ဗျ။
ရွာထဲရောက်ရင် ဘာလုပ်ပါတွေ ပြောထားပေမယ့်
ရွာတံခါးတောင် ဖွင့်မရတဲ့ ကိစန
ဂိတ်စောင့် တယောက် အမြဲချထားပေးစေလိုပါကြောင်းးးးး။